Alteryx: Qalabaynta Nidaamka Falanqaynta (APA) | Martech Zone
Markay shirkadaydu caawiso oo ay wado safarada isbadalka dhijitaalka ah ee shirkadaha shirkadaha, waxaan diirada saareynaa 3 meelood oo muhiim ah - dadka, hababka, iyo barnaamijyada. Waxaan markaa abuureynaa aragti iyo khariidad si aan uga caawinno shirkadda inay otomatig ka dhigato oo ay u dhisto wax-ku-ool gudaha ah iyo sidoo kale inaan u beddelno khibrada macaamiisha dibadda.
Waa hawl qabasho adag oo qaadan karta bilooyin, oo lagu darayo daraasiin shirar ah oo lala yeesho hoggaanka iyo falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan xogta, aaladaha, iyo isdhexgalka ay meheraddu ku tiirsan tahay. Sababta ugu muhiimsan ayaa ah in xogta laga sifeeyey saddexda aag.
Waa maxay Qalabaynta Nidaamka Falanqaynta (ACA)?
Qalabaynta Nidaamka Falanqaynta waxay calaamad u tahay bislaanshaha xogta iyo softiweerka falanqaynta, kaas oo ka koobnaan jiray suuqyo kala duwan oo ay ku jiraan falanqaynta, sirdoonka ganacsiga, sayniska xogta, iyo qalabka barashada mashiinka. APA waxay iskuxireysaa seddex tiir oo muhiim ah otomaatiga iyo isbadalka dhijitaalka ah si ay awood ugu siiso dimuqraadiyada xogta iyo falanqaynta, otomatiga ee geedi socodka ganacsiga, Iyo xirfadda dadka waayo, guul degdeg ah iyo natiijooyinka isbedelka.
Qalabaynta Nidaamka Falanqaynta (APA) waa teknolojiyad u oggolaanaysa qof kasta oo ururkaaga ka mid ah inuu si fudud ula wadaago xogta, si otomaatig ah u hawlgaliyo hababka adag, una beddelo xogta natiijooyin. Iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Is-beddelka Falanqaynta, qof kastaa wuu furi karaa fikradaha saadaalinta iyo tilmaamaha ee keenaya guul dhakhso leh iyo ROI dhakhso leh.
Alteryx, Waa maxay APA?
Alteryx waa barxad mideysan oo loogu talagalay falanqaynta, sayniska xogta, otomaatiga howsha, autoML, iyo AI:
Waxsoosaarka Hantida ee otomaatiga ah - 80 + ilaha xogta isku dhafan ee asal ahaan ka yimid Amazon ilaa Oracle ilaa Salesforce. Si ammaan ah ugu xir lambar aan xadidnayn oo ilo dheeri ah. Haddii aad heli karto xogta, waad geyn kartaa Alteryx oo waqti badan ayaad kubixineysaa falanqaynta iyo waqti yar oo raadinta ah.
Tayada iyo Diyaarinta Xogta - Baadh oo ku xidho xogta kaydka macluumaadka goobta, daruuraha, iyo noocyada xogta yar ama weyn iyo wixii intaa ka sii badan. Si fudud u nadiifi, u diyaarso, uguna qasn xogta laga helo ilo kala duwan oo kala duwan ama aan lahayn aqoonsiyo gaar ah oo lagu bixinayo astaamaha xogta midaysan.
Kobcinta Xogta iyo Aragtida - Ku darso awoodda daruurta aaladaha ku jira keydka macluumaadka oo xogta weyn u beddelaya aragti weyn. Ka gudub xogta caadiga ah ee tirada dadka leh macluumaadka iibsiga habdhaqanka iyo tafaariiqda si aad u abuurto aragti qoto dheer oo si dhab ah u fahamto macaamiisha. Ku kobci falanqayntaada khariidado, xallinta xalalka, awoodaha wadista, iyo faham qoto dheer ee macaamiishaada iyo goobahaaga - maxaa yeelay wax waliba meel bay ka dhacaan.
Sayniska Xogta iyo Go’aamada - Upskill soo saarista gorfeynta kooxdaada iyadoo aad hageyso tallaabo tallaabo iyo tusaalayn gacan leh si aad u dhisto moodello aan lahayn koodh ama khibrad falanqeyn. Ku kasbasho fikrado iyo jawaabo wanaagsan adoo adeegsanaya xogta hababka gorfaynta adag, laga bilaabo falanqaynta dareenka xogta aan habeysnayn ilaa dhisidda moodallo isku dhafan oo R ku dhisan oo leh xirfado sir ah oo aad u yar. Ku kaydi lakabka sirdoonka falanqaynta horumarsan, sida barashada mashiinka, si aad u bixiso aragti hore u socota.
Qalabaynta Natiijooyinka - Awood siiso kuwa kale inay qaabeeyaan falanqeyn kasta ayna go'aan ku gaaraan barnaamijyada gorfeynta. Ku wadaag qaabab kala duwan sida dib ugu soo qorista keydka ama bot ama ka faaideysiga xaashiyaha ama warbixin si sahlan loo isticmaalo. Mar uun dhis oo automate weligaa. Si wax ku ool ah ula xiriir jawaabaha lana wadaag dadka ay khuseyso si ay tallaabo u qaadaan, u indha indheeyaan wax soo saarka, ama xitaa ugu abuuraan dashboor khafiif ah Alteryx. Kordhi wax soo saarka aadanaha isla markaana u suurtageliya kor u qaadista joogtada ah ee dadka leh go'aan caqli badan si ay u keenaan natiijooyin dhakhso leh, ka wanaagsan.
Isticmaalayaashu waxay ka bilaabaan kiiska ganacsiga waxayna si dhakhso leh u abuuri karaan falanqayn, sayniska xogta, iyo natiijooyinka habka otomatiga, iyaga oo aan u baahnayn xirfad gaar ah.
Wax ka beddelka Kobaca Safka hore
Beddelida Soo Noqoshada Khadadka Hoose
Beddelidda Karti-xirfadeedka Shaqaalaha
Saamaynta ka dhalatay APA waa natiijooyin ganacsi oo dhakhso badan, habab ganacsi oo si otomaatig ah u shaqeynaya, iyo awoodda si dhakhso leh kor loogu qaado oo saameyn loogu yeesho.
Dembi Isdhaxgalka Alteryx Alteryx Bilaash 1-Bilood Maxkamad
Platform Experience Adobe iyo Alteryx
Nidaamka Is-beddelka Nidaamka Is-beddelka Alteryx iyo Nidaamka Khibradda Adobe wuxuu u oggolaanayaa ururada inay otomatig ka dhigto falanqaynta suuq-geynta si loo gaaro natiijooyinka falanqaynta degdegga ah. Alteryx APA Platform waxay bixisaa xal fudud, jiid-iyo-dhibic ah oo fududeynaya helitaanka xogta iyo falanqaynta, waxayna u oggolaaneysaa suuqleydu inay isku daraan xogta laga helo ilaha xogta Adobe Experience Cloud, oo ay ku jiraan Marketo Engage iyo Adobe Analytics, daqiiqado gudahood si loo abuuro aragtiyo muhiim ah oo loogu talagalay ogaanshaha iyo falanqaynta saadaalinta.
Tags: falanqaynta adobeisweydaarsiga adobemadal khibradeed adobeaialteryxAlteryx apaQalabaynta Nidaamka FalanqayntaapaIsbadal digital ahbarashada mashiinkaMarketo ku hawlanfalanqaynta saadaalinta
DroppTV: Adeegsiga AI si loo aqoonsado loona iibiyo alaabada fiidiyowyada